बिरोधीलाई मन्त्री दिएपछि ओली शक्तिशाली
शिवपसाद सिग्देल -
नेकपाभित्र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गर्ने दुई हस्ती भीम रावल र घनश्याम भुषाल थिए । घनश्याम भुषालले त यो सरकारबाट अपराध र भ्रष्टाचारको गन्धमात्र आउँछ भनेर कटु आलोचना गरेका थिए ।
यस्तो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्न लाज लाग्छ समेत भनेका थिए । तिनै घनश्याम भुसाललाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाइदिएका छन् । घनश्याम भुषालले मन्त्रीको पद बहाली गर्दा म लोभमा परुँलाजस्तो लाग्दैन भनेर पित्त छादेको पनि देखियो ।
भीम रावल सडकमै छन् । उनी अहिले पनि सरकारको कटु आलोचना गरिरहेका छन् । विपक्षी उदासीन रहेको र विपक्षीजस्तो नदेखिएको बेलामा सरकारका गलत क्रियाकलापमा मुङ्ग्रो प्रहार गर्ने र सिधा बाटो देखाउने कुनै नेता नेकपाभित्र छ भने ती भीम रावल हुन् । उनी एक्लिएका छन् ।
प्रश्न के छ भने घनश्याम भुषाल सहभागी भएको सरकारले उनले पहिले भनेजस्तो ‘यो दलालको सेवा गर्ने दलाल सरकार हो’ कायमै रहन्छ कि कायापलट हुन्छ ? घनश्याम भूषाल आफै अति केन्द्रीकृत, संकुचित र असहिष्णु ओली सरकारका मन्त्री हुनु अर्को आश्चर्य हो । यी तिनै नेता हुन् जो माक्र्स, माओको निकै व्याख्या गर्ने गर्थे । कतै यिनले नेकपाको नेतृत्वको नेपाल सरकारलाई त्यही राजमार्गबाट हिडाउने हुन् कि ?
सरकारमा ओलीतन्त्र छ, यो आफैमा अरिंगाल, छौंडातन्त्र पनि हो । जुन तन्त्रको बिरोध गरेर आफ्नो उचाइ मन्त्री हुनेसम्म पु¥याएका थिए, ती घनश्याम भुषालले सरकार भित्रैबाट वैचारिक र सांस्कृतिक क्रान्ति ल्याउने पो हुन् कि । तर दृश्य कस्तो छ भने न आशलाग्दो सरकार छ, न आशलाग्दो प्रतिपक्षी छ । आशलाग्दा यस्ता नेताहरु पनि उही भ्रष्ट सरकारमा सामेल भएर भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने कुरा सपना हो ।